Kuratidzira kune chisimba mumugwagwa kunotanga muSydney neMelbourne, mazana akasungwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Australia Kuputsa Nhau » Kuratidzira kune chisimba mumugwagwa kunotanga muSydney neMelbourne, mazana akasungwa
Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Pamberi pekufora, mapurisa akazivisa zero-shiviriro mutemo wekuratidzira kupi zvako muSydney, neNew South Wales mutevedzeri wemapurisa Commissioner Mal Lanyon achiti mamwe ma1,400 mapurisa achaendeswa nechinangwa ichocho.
VaAustralia vari kuratidzira anti-COVID kurambidzwa.
Sydney neMelbourne kuratidzira kunotungamira mukukonana nemapurisa.
Vazhinji vevaratidziri vakasungwa.
Kuratidzira kune chisimba kwakamuka nhasi mumaguta makuru maviri eAustralia. Mugovera masikati kuratidzira muSydney neMelbourne, nezviuru zvevanhu vekuAustralia vachishora matanho akasimba ekurwisa-COVID-19, coronavirus lockdowns nemitemo yekudzoka kumba, kuimba manzwi uye kusimudzira zviratidzo zvekurambidza, zvakakurumidza kukwira kuita kuratidzira kukuru uye kupokana nemapurisa, avo vakapindura mhiripiri, mabhurugwa emigwagwa uye nhevedzano yekusungwa.
Mifananidzo inoitisa pamhepo online yakaratidza mapoka evanhu achipfuura nepakati peMelbourne, pane dzimwe nzvimbo vachirwisana nemapurisa anorema akaiswa kuvhara kufamba. Pepper spray yakaburitswa pane vairatidzira vachipindura.
Kusungwa kwakawanda kwakatorwawo muSydney, uko mumwe murume akanzwika achipopota "sei mandisunga?" sezvo akaendeswa kure nevakuru.
Pamberi pekufora, mapurisa akazivisa zero-shiviriro mutemo wekuratidzira kupi zvako muSydney, neNew South Wales mutevedzeri wemapurisa Commissioner Mal Lanyon achiti mamwe ma1,400 mapurisa achaendeswa nechinangwa ichocho. Lanyon akasimbirira "Izvi hazvisi zvekumisa kutaura kwakasununguka, izvi ndezvekumisa kupararira kwehutachiona," nepo gurukota rezvematongerwo enyika David Elliott akayambira varatidziri kuti vatarisana ne "simba rakazara remapurisa eNSW."
Pamusoro pekuendeswa kukuru kwemapurisa, zviremera zvakare zvakaraira mabasa ekuparadzanisa vanhu kuti vasatakure vafambi kupinda muCentral Business District yeSydney, nepo zvitima zvisingamire pane zvimwe zviteshi zveguta, sekutaura kwenzvimbo. Migwagwa yemapurisa yakaonekwa zvakare muSydney, kuyedza kuvhara migwagwa mikuru kuratidzira kuratidzira.
Iwo madhimoni anouya munguva pfupi mushure mekunge vakuru muNew South Wales vazivisa kuwedzerwa COVID-19 kukiya musi weChishanu, yakagadzirirwa kuisa inenge hafu Sydney'' Mamirioni mashanu vagari pasi pehusiku husiku kusvika pamba pakati paGunyana. Kurongeka kwakafanana kwatove kuri munzvimbo muMelbourne, zvichireva zvinopfuura kota ye OsitireriyaHuwandu hwevanhu vacharamba vari pasi pemiganhu yekukiya, izvo zvinoda kuti vagari vagare pamba pamwe nezvakasarudzika.
Mutungamiriri weNSW Gladys Berejiklian akataura kuti danho iri raifanirwa kudzora kupararira kwechimwewo chinotapukira cheDelta, icho chakaendesa kuwedzera kwezviitiko mudunhu rese. Yakataura kuti mazana masere nemakumi masere nemakumi maviri nemapfumbamwe akabatwa nemunharaunda nemugovera, kuwedzera kwakakura kubva pa825 vakafanobata zuva rapfuura.
Nyika yeVictoria, iko kunowanikwa Melbourne, yakafamba zvirinani mumavhiki apfuura, kunyangwe iri kutanga kuona kusimuka mumamiriro ezvinhu, ichitaura 61 pamusoro pemaawa makumi maviri nemana apfuura, kubva ku24 mazuva maviri apfuura. Victoria yakarova yepamusoro Nyamavhuvhu yapfuura, payakaona yakakwira-nguva yakazara hutachiona hwe57 muzuva rimwe.